Vaovao ROH / NJPW: Adam Page dia miresaka momba ny toetrany Hangman sy ny tantaran'i Bullet Club maharitra - Wwe
Vaovao ROH / NJPW: Adam Page dia miresaka momba ny toetrany Hangman sy ny tantaran'i Bullet Club maharitra
Raha vao niresaka tamin'ny Ny taratasy Pittsburgh City , Pejy fanomezam-boninahitra an'i Ring of Honor Adam 'Hangman' Page niresaka momba ny toetrany 'Hangman' sy ilay tantara efa ela momba ny Bullet Club.
Tamin'ny taona 2016, nandritra ny fitsidihan'ny Ring of Honor's War of the Worlds dia nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny Bullet Club i Adam Page rehefa nitodika tany amin'ny Colt Cabana, The Briscoes, ary The Motor City Machine Guns izy nandritra ny lalao ekipa folo lahy.
Rehefa avy nifanerasera tamin'ny Bullet Club at War of the Worlds izy, dia nanao fanambarana lehibe avy hatrany i Page rehefa nanantona an'i Chris Sabin tamin'ny tadin'ilay hangmanina izay nanome ny anaram-bosotra 'hangman' azy.
Tamin'ny resadresaka nifanaovany tamin'i The Pittsburgh City Paper, Adam Page dia niresaka ny niandohan'ny gimmick 'Hangman' azy ary nanambara ny fomba nanombohany ilay hevitra. Ireto ambany ireto dia manasongadina vitsivitsy amin'ny resadresaka:
Ao amin'ny gimikick an'i Hangman Page:
Araka ny voalazan'i Page, dia nanamarika izy fa talohan'ny nidirany tao amin'ny Bullet Club ary nanao ny laharam-pahamehana voalohany ho an'ny New Japan Pro Wrestling, ilay 26 taona dia toa tsy maintsy namorona karazana anarana hafa noho i Adam Cole (izay efa teo aloha mpikambana ao amin'ny Bullet Club) manatevin-daharana ny ankolafy miaraka amin'izay.
Pejy nilaza fa nisy olona avy amin'ny fitantanan'i New Japan toa nanolotra azy ny anarana Hangman Page sy ilay Tompondakan'ny ekipa enin-dehilahy enina ROH izay nandeha naka ny hazo fijaliana — ny fofon'ilay hangman — avy amin'ny mpikambana taloha tao amin'ny klioba, Luke Gallows, izay saika naneho sary an-tsaina gimikika mitovy amin'izany nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny Bullet Club.
Pejy no nilaza izany:
'Raha jerena ny jery todika dia zavatra iriko tsy ho nataoko izany, na raha nanao zavatra hafa aho. Saingy heveriko fa maika faingana aho mba hanafatra fitaovana, hahalalako hoe iza sy iza aho. Tamin'ity fotoana ity dia efa hitako ilay izy, saingy tsikaritra roa herinandro fotsiny? '
'Nanana ilay tadim-bava nandritra ny fotoana kelikely aho ary nanandrana nivadi-pinoana araka izay azoko natao tamin'ny fomba rehetra azo atao, saingy mbola nanana olona nanoratra tamiko ihany aho fa tsara fanahy momba an'io, saingy nisy olona ao amin'ny fianakaviana namono tena ka nahatonga azy ireo tsy mahazo aina, na angamba ny fiheverana ara-poko ahy mitondra tadidy dia tsy mahazo aina, azoko izany. Niezaka ny ho mora tohina momba izany aho, saingy zavatra tiako hialana izany. '
Ny tantaran'ny Bullet Club efa ela:
Ny pejy dia nanambara fa tamin'ny andian-dahatsary an'ny Young Bucks 'YouTube The Being The Elite, mpankafy maro no efa niova isan-kerinandro ary nandefa hafatra ho an'ny mpilalao BTE ihany koa mba hampahafantarana azy ireo fa ny andiany Being The Elite dia zavatra andrasan'izy ireo tsy tapaka. to ary zavatra mahasarika an'ireo mpankafy ireo amin'ny faran'ny herinandro.
'Ity, ho ahy, no atao hoe tolona. Izany no antony itiavako azy, ankafizo ny fanaovana azy maharitra. Tantara maharitra, mifamatotra amin'izany ny olona. Miaraka amin'ny maha-Elite azy ireo dia mijery izany ny olona isan-kerinandro ary misy olona mandefa hafatra amintsika mba hilazana fa zavatra andrasan'izy ireo tsy tapaka izany, zavatra iray mahasarika azy ireo mandritra ny herinandro ary misy ny olona tena tonga eo. Asan'ny fiainantsika io, ary io no tianay atao. '
Hangman Page dia ampahany amin'ny ady an-trano eo anelanelan'ny Cody Rhodes sy Kenny Omega ankehitriny, ary toa ny mpikambana ao amin'ny BC izay manohana tanteraka an'i Cody.
Adam 'Hangman' Page dia azo antoka fa iray amin'ireo hetsika tiako indrindra amin'ny indostria ankehitriny ary mino aho fa tena mendrika ny fankasitrahana rehetra eran'izao tontolo izao ity lehilahy ity, noho ny fampisehoana mahatalanjona nataony ho an'ny ROH sy ny NJPW.
izay tadiavin'ny lehilahy amin'ny sipa
zavatra mahafatifaty azonao atao ho an'ny sakaizanao
ny fomba hampandeha haingana kokoa ny andro